Momba anay | Lingshou Huajing Mica Co., Ltd.
Tongasoa eto Huajing Mica
Lingshou Huajing Mica Co., Ltd., natsangana tamin'ny taona 1994, dia manana tantaram-piainana 27 taona hatreto. Izy io dia orinasa miompana amin'ny famokarana mazàna amin'ny fanodinana be dia be ny metaly tsy metaly anisan'izany ny mika voajanahary, mika sentetika, mineraly miasa sns sns. Huajing dia manome vahaolana manerantany mifototra amin'ny fampiharana mineraly avo lenta, fampiharana avo lenta, izay ahitan'ny mika famokarana andiana kilasy vovoka manontolo. Ny orinasa dia nametraka ivontoerana fikarohana sy fampandrosoana roa amin'ny sehatra samihafa, izay hanomezana fanohanana matanjaka ara-teknika ho an'ny famokarana indostrialy sy ny fitaovana fanatsarana tarehy. Rehefa afaka 20 taona mahery ny fampandrosoana sy ny fanavaozana mitohy, Huajing dia nahazo "National High-tech Enterprise", "Hebei Province special special enterprise" ary ireo mari-boninahitra hafa mifandraika amin'izany. Huajing dia manaraka ny lalan'ny fanavaozana sy ny fampandrosoana, manaraka ny fanatontoloana ny marika sy ny fanamarinana ny vokariny. Izy io dia manolo-tena amin'ny fananganana "orinasan-tsarimihetsika mineraly avo lenta sy mahomby", miaraka amin'ny akora mineraly avo lenta ho mpanentana ny fitomboan'ny harinkaren'i Shina sy izao tontolo izao.
Niorina ao amin'ny
Lingshou Huajing Mica Co., Ltd., natsangana tamin'ny 1994.
Lingshou Huajing Mica dia manana tantaram-piainana 27 taona izay.
Fanavaozana mahaleo tena
Maherin'ny 20 taona ny fampandrosoana sy fanavaozana mitohy.
Huajing dia manana ekipa matihanina manana mpikambana efa ho zato, nanolo-tena tamin'ny famokarana sy fanamboarana vokatra kalitao avy amin'ny mika sy vokatra mineraly hafa. Ireo akora mineraly manokana mahomby, indrindra ao anatin'izany ny kosmetika avo lenta, plastika injeniera, loko manohitra ny lozisialy, Ny haingon-trano fiarovana ny tontolo iainana, ary ny fitaovana fanamafisam-peo manokana, dia nahazo toerana mitarika an'i Huajing eo amin'ny sehatry ny fampiharana. Ny orinasa dia mifikitra amin'ny paikady fampandrosoana maharitra kalitao avo lenta ary mandray ny fanavaozana ara-tsiansa sy teknolojia ho fifaninanana ifotony. Indrindra tato anatin'ireo taona faramparany dia manana tombony ara-teknolojika lehibe sy traikefa manan-karena amin'ny famokarana mika sentetika, ny fampiharana mineraly miasa, ny famerenana amin'ny laoniny feno sy ny fampiasana ireo loharano ambany sy ny lafiny hafa mifandraika amin'izany.
Huajing dia manaraka ny hevitry ny rafitra fitantanana mandroso. Ny fitantanana ny ozinina dia mifanaraka amin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001: 2015, ISO14001: 2015 rafitra fitantanana tontolo iainana sy OHSA18001: 2007 rafitra fitantanana fahasalamana sy fiarovana amin'ny asa. Vokatry ny fanatsarana tsy tapaka ny haavon'ny fitantanana sy ny famokarana azy manokana, Huajing dia manana mpanjifa efa ho 400 eran'izao tontolo izao, toy ny orinasa an-trano fanta-daza Kingfa Scince & Technology, Oakley New Materials, ary koa ireo orinasa fanta-daza iraisam-pirenena toy ny German Basf, ny Japoney Mitsubishi Chemical, Nippon Paint, ny LG LG, Hyundai, ary ny American Dow chemicals, sns. Ireo fikambanana voalaza rehetra dia nametraka fifandraisana maharitra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasanay.
Miaraka amin'ny matihanina, ny fahitsiana, ny fanajana ary ny fanavaozana amin'ny maha-fanekem-pinoany azy, Huajing Mica dia manantena ny hamorona ho avy tsaratsara kokoa miaraka aminao miaraka amin'ny vina fanatsarana sy fanomezana fahafaham-po ny lanjan'ireo vokatra mpanjifa.